Xildhibaan Maxamed Axmed Gurxan oo u geeriyooday dhaawacyo ka soo gaaray weerarkii sakay lagu qaaday – STAR FM SOMALIA
Xildhibaan Maxamed Axmed Gurxan oo u geeriyooday dhaawacyo ka soo gaaray weerarkii sakay lagu qaaday
Allaha u naxariistee waxaa u geeriyooday dhaawacyo soo gaaray maanta Xildhibaan Maxamed Axmed Gurxan oo ka tirsan Baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya kaasoo saaka ay kooxo hubeysan ku weerareen degmada Xamar weyne ee magaalada Muqdisho.
Xildhibaanka la dhaawacay ayaa ka tirsanaa Guddiga Arrimaha Gudaha iyo Amniga ee Baarlamanaka waxa uuna ahaa Xoghayaha Guud ee Guddigaasi.
Xildhibaanka ayaa la sheegay in ay rasaas ku fureen dabley watay gaari nuuca kaaribta ah oo madow iyadoo ay dableyda ay goobta ka baxsadeen.
Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya ayaa Hay’adaha ammaanka ka dalbaday inay gacanta ku soo dhigaan dadkii ka dambeeyay falka Xildhibaanka lagu weeraray.
Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa ka tacsiyadeeyay geeridii ku timid Xildhibaan Maxamed Axmed Gurxan
Ra’iisul Wasaare Cuma Cabdrishiid Cali ayaa dhagax dhigey dib u dhis lagu sameynayo safaarada ay dowlada Soomaaliya ku leedahay magaalada Nairobi(Daawo Sawirada)